पछाडि स्कूल फिजिकलको तालिका बनाउने - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य चेकआउट घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट कल्याण औषधि बनाम मित्र समाचार, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी भारी खेल
मुख्य >> कल्याण >> पछाडि स्कूल फिजिकलको तालिका बनाउने
ग्रीष्म rolतुमा बित्दै जाँदा, धेरै अभिभावकहरूले नयाँ स्कूल वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै चीजहरूको सूचि बनाउन शुरू गर्दछन्। तपाइँको बच्चाको लागि स्कूलको भौतिक प्राप्त गर्नाले तपाइँको गर्नुपर्ने कामको सूचीमा निश्चित रूपमा ठाउँ पाउनु पर्छ। तपाईको बच्चा स्वस्थ छ र सबै कुरा ट्र्याकमा छ भन्ने निश्चित गर्नका लागि यो तपाईको मौका हो - र कुनै समस्याग्रस्त कुरा पत्ता लागेन।
जबकि २०२० कुनै पनि अन्य स्कूल वर्ष जस्तो नहुन सक्छ, शारीरिक स्वास्थ्य जाँच गर्नु सधैं सुरक्षित अभ्यास हो, तपाईको कक्षामा कक्षा अनलाइन हुनेछ भने पनि।
कसरी कम गर्न को लागी उच्च रक्तचाप स्वाभाविक रूप मा छिटो
तपाईं आफ्नो बच्चा संग एक मौका लिन चाहनुहुन्न, बाल रोग विशेषज्ञ भन्छन् डेनेल फिशर , एमडी, क्यालिफोर्नियाको सान्टा मोनिकामा प्रोविडेंस सेन्ट जोन्स हेल्थ सेन्टरमा बाल रोग विशेषज्ञको उपाध्यक्ष।
के तपाईंको बच्चालाई प्रत्येक बर्ष भौतिक चाहिन्छ?
डाक्टरहरू हो भन्छन्। लेआ अलेक्ज्याण्डर, एमडी बताउँदछन् कि यो महत्वपूर्ण छैन कि एक बर्ष छोड्नु हुँदैन जब यो तपाईंको बच्चाको जाँचको तालिका बनाउँदछ।
कमजोर बृद्धि, अप्रत्याशित वजन र हानि, र मनोवैज्ञानिक समस्या जस्ता समस्या जसमा स्कूलको प्रदर्शन र समग्र कल्याणमा असर पर्छ अन्यथा मिस गर्न सकिन्छ, डा। अलेक्ज्याण्डर, एक चिकित्सा सल्लाहकार भन्छन्। आमा सबैभन्दा मनपर्दछ ।
यदि तपाई कुनै क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ जुन हाल COVID-19 प्रकोपको अनुभव गर्दै छ, यो CDC सिफारिश गर्दछ नियमित स्वास्थ्य सेवा ढिलाइ - तर अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिशियनहरू (AAP) आग्रह गर्दैछ लगातार हेरचाह। यो सँधै राम्रो अभ्यास हो तपाईंको बच्चाको प्रदायकले के सिफारिस गर्छन् भनेर हेर्न।
अपोइन्टमेन्टको दिनमा तपाई घरै बस्नु पर्छ यदि तपाई कोरोनाभाइरस को लक्षणहरु को अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं हेल्थकेयर सुविधाहरूमा जानुहुँदा मास्क लगाउनुहुन्छ, र तपाईंको अपोइन्टमेन्ट समय सम्म कारमा बस्नुहोस् तपाईंको प्रतीक्षालयमा अन्यसँग सम्पर्क सीमित गर्न। वा, टेलीहेल्थ विकल्पहरूको बारेमा सोध्नुहोस् । COVID-19 प्रकोपको बाबजुद, खोपहरूलाई अद्यावधिक राख्नु विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
स्कूलको भौतिकमा के समावेश हुन्छ?
एक सामान्य स्कूल शारीरिक अपोइन्टमेन्टको क्रममा, तपाइँको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञले निम्नको जाँच गर्न सक्छन्:
महत्त्वपूर्ण संकेत , रक्तचाप, उचाई, वजन, बडी द्रव्यमान सूचकांक सहित
चिकित्सकिय इतिहास, मल त्याग, पोषण, निद्रा, दन्त स्वच्छता, र विकास सहित कुनै मुद्दाहरू सहित
पारिवारिक चिकित्सा ईतिहास
शारीरिक स्वास्थ्य , एक परीक्षाले यो सुनिश्चित गर्दछ कि सबै चीजहरू काम गर्ने क्रममा छन्, जस्तै जोड़हरू र हड्डीहरू
हृदय जोखिम स्थिति परिवारका सदस्यहरूमा प्रारम्भिक हृदय समस्याहरूको कुनै पनि इतिहास सहित। हामीले पत्ता लगाउन खोज्नु भनेको के हो भने यदि व्यायामको क्रममा त्यहाँ कुनै हृदय घटनाहरू घटिरहेका छन जुन एउटा ठूलो रातो झण्डा हो, डा। फिशर बताउँदछन्।
तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले दुबैलाई कुनै प्रश्न सोध्ने वा कुनै चिन्ता व्यक्त गर्ने मौका दिनेछ।
तपाईंको बच्चाको मेडिकल ईतिहास र तपाईंको पारिवारिक मेडिकल ईतिहासको बारेमा तपाईंको बच्चाको डाक्टरको साथ सत्यवादी हुनुहोस्। त्यो जानकारीले डाक्टरहरूलाई तपाईंको बालबालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ - र उनीहरूको जोखिम केहि सर्तहरू विकास गर्न वा केही चोटपटक लाग्नेमा।
यदि तपाईंले भर्खर चेक-अपको लागि आफ्नो बच्चालाई प्राथमिक हेरचाह प्रदायकमा लैजानुभयो भने, तपाईंले स्कूलको भौतिक लागि अर्को भेटघाट गर्नुपर्दैन। यदि तपाईंले आफ्नो बच्चालाई चेक-अपको लागि ल्याउनुभएको छैन वा एक स्कूल चेक-अप आवश्यक हुन सक्छ राम्रो-बच्चाको भ्रमण पछिल्लो वर्ष भित्र।
स्कूल शारीरिक बनाम खेल शारीरिक
यदि तपाइँको बच्चा स्कूल मा एक खेल खेल्छ, संभावना त्यहाँ त्यहाँ एक पर्ची बाहिर छ, तपाइँको हस्ताक्षर को लागी प्रतीक्षा गर्दै। र त्यहाँ एक फारम छ जुन तपाइँको बच्चाको प्रदायक द्वारा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ, खेल खेल्नको लागि तिनीहरूलाई खाली गरेर। त्यस फारमले तपाईंलाई तपाईंको बच्चालाई खेलकुद भौतिक प्राप्त गर्न लिन आग्रह गरिरहेको छ। AAP ले खेल भौतिकको बारेमा प्रदायकहरूको साथ साथै खेल क्लियरन्स फारममा नि: शुल्क पहुँच प्रदान गर्दछ यहाँ ।
खेल भौतिकहरू र स्कूल शारीरिकहरू धेरै समान छन्। ती दुबै बच्चाको स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्ने मुद्दाहरूको कुनै पारिवारिक इतिहास सहित, पूर्ण चिकित्सा इतिहासको महत्त्वमा जोड दिन्छन्।
खेलकुद फिजिकल भनेको बच्चालाई समस्याहरूको लागि पर्दा बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो जुन खेल वा शारीरिक गतिविधिमा विकास हुन सक्छ, भन्छ कार्लोस युक्विला MD त्यसोभए, खेलकुद भौतिकको एक घटकले बच्चालाई सम्भाव्य आर्थोपेडिक मुद्दाहरूको लागि जाँच गर्दैछ जुन उनीहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्छ। खेलकुद भ्रमणले सुरक्षा र चोटपटक रोकथामको लागि निश्चित खेलहरू वा खेलकुदको सहभागितामा असर पार्ने चिकित्सा शर्तहरूको साथ एथलीटहरूका लागि अग्रगामी निर्देशन प्रदान गर्न सक्दछ।
फेरि, यो खेलको शारीरिक र तपाइँको बच्चाको लागि नियमित शारीरिक दुबै तालिका बनाउन आवश्यक छैन। यदि तपाईंले भर्खर आफ्नो बच्चालाई नियमित जाँच वा शारीरिक परीक्षणको लागि बाल रोग चिकित्सकमा लैजानुभएको छ भने, तिनीहरूलाई सायद एउटा छुट्टै खेल भौतिक आवश्यक पर्दैन।
चिकित्सा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दा थप भ्रमणको आवश्यक पर्दैन जबसम्म बच्चाले चिकित्सा समस्याको विकास गर्दैन जसले खेल खेल्ने उसको क्षमतामा असर गर्छ, अर्थात कार दुर्घटनाबाट घाइते हुने अलेक्ज्याण्डरले भने।
तर, भ्रमणको तालिका बनाउन धेरै पर्खाइ नगर्नुहोस्। तपाइँ फारमहरू तपाइँको बच्चाको स्कूलमा फिर्ता हुनुभन्दा अघि तपाइँ समय समाप्त हुन चाहनुहुन्न। कम्तिमा weeks हप्ता पहिले तपाइँको बच्चाले खेलकूद वा स्कूल सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ सफारेन्सका लागि आवश्यक पर्ने कुनै अन्य भेटहरू वा उपचारहरू छन्।
यदि तपाइँलाई समयको लागि थिच्नु भएको छ भने, तपाइँ स्थानीय वॉक-इन क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ जुन स्कूल फिजिकलहरू प्रदान गर्दछ, तर तपाइँ खर्चको केही खर्चमा जेबबाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, एक वाक इन क्लिनिकमा तपाईंको मेडिकल रेकर्ड हुने छैन र बाल-प्रशिक्षित प्रदायकहरू नहुन सक्छ। डा। फिशर यो मार्ग जाने अभिभावकलाई पछि उनीहरूको बाल बाल चिकित्सकको साथ अनुसरण गर्न निश्चित हुन आग्रह गर्दछन्।
के बीमाले स्कूल भौतिकहरू कभर गर्दछ?
एउटा चीज तपाईले चिन्ता लिनु हुँदैन भनेको भौतिकलाई भुक्तान गर्नु हो। सामान्यतया, तपाईंको स्वास्थ्य बीमा एक वार्षिक शारीरिक वा चेक-अप को लागत कभर गर्नु पर्छ र प्रतिलिपि बिना तपाईंको बच्चाको लागि खोप।
यदि तपाईंसँग स्वास्थ्य बीमा छैन भने, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले यो महत्त्वपूर्ण भ्रमण त्याग्नु पर्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सामान्यतया निःशुल्क वा कम लागतमा नियमित भ्रमणहरू प्रस्ताव गर्दछ। को HRSA स्वास्थ्य केन्द्र संसाधन तपाइँलाई तपाइँको नजिक स्वास्थ्य केन्द्र फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको बच्चाको बाल रोग विशेषज्ञको साथ तपाईंको अवस्था साझा गर्नुहोस्। केही कार्यालयहरूले नगद भुक्तानीको लागि छुट प्रस्ताव गर्दछ।
अर्को पढ्नुहोस्: कसरी बीमा बिना डाक्टर हेर्न
कति टायलेनोल र ibuprofen एक साथ लिन सक्छु
र, तपाइँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा वा तपाइँ निःशुल्क वा कम लागतको स्वास्थ्य बीमाको लागि योग्य हुनुहुन्छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउनको लागि सामाजिक सेवाहरूको स्थानीय विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कसरी छिटो प्राकृतिक रक्तचाप तल प्राप्त गर्न
कसरी खमीर संक्रमण को लागी लसुन को उपयोग गर्ने
खमीर संक्रमण पुरुष को लागी काउन्टर मेड मा
कहिले सम्म तपाइँ dulcolax मल सफ्टनर लिन सक्नुहुन्छ
कसरी शल्यक्रिया पछि कब्जियत छिटो छुटकारा पाउन